Maitiro ekuita nhema detector neArduino | Mahara emahara
Kuenderera mberi nezvirongwa zvekugadzira yako wega mapurojekiti, ino nguva ini ndoda kukuratidza kuti sei gadzira inonakidza nhema nhema detector Izvo zvekusiya vese vashanyi vako nemiromo yakavhurika nekuda kwekuita kwayo kwakanaka. Sekureva kwemusoro wenyaya ino, panguva ino tiri kuzoshandisa iri nyore Arduino bhodhi inozoshanda semutungamiriri wepurojekiti yese.
Mune ino purojekiti, pamusoro pekudzidza mashandiro emhando dzeaya ma detectors zvakadzama, chimwe chinhu chinonakidza, chichatibatsira kuziva mashandiro anoita muviri wedu nemhinduro dzakasiyana dzaanogona kupa zvinoenderana nemamiriro ezvinhu aunozviwana iwe kana, kune rimwe divi, manzwiro aunotambura zvichienderana nemubvunzo wavanogona kukubvunza iwe.
1 Mashandiro anoita nhema detector
1.1 Rondedzero yezvikamu zvatichazoda kuvaka yedu nhema detector
1.1.1 Zvakakodzera zvemagetsi zvinoriumba
1.1.2 Zvinhu zvinodiwa
1.1.3 Zvishandiso zvinodiwa
1.2 Takatanga kuumba nhema detector yedu nekubatanidza chirongwa chese
1.3 Ino ndiyo nguva yekuvandudza nekuisa ese software kune yedu nhema detector
1.4 Isu tinoita clip dzichaenda paminwe yechinhu kuti chiongororwe
1.5 Kugadzira bhokisi rekuchengetedza zvese zvedu Hardware
Mashandiro anoita nhema detector
Usati watombotanga kuvaka yako nhema detector, zvingave zvakanaka kuti unzwisise kuti zvinoshanda sei. Nekuda kweizvi, zvichave zviri nyore kwazvo kuti iwe unzwisise kuti nei Hardware ichibatana neimwe nzira uye kunyanya nei kodhi yekodhi inoita kuti zvese zvishande nemazvo yakarongedzwa nenzira iyoyo. Ipapo icho chikamu chekugadzirisa chinosvika icho chauchazonyatsoda kuyedza gadzirisa uye gadzirisa chirongwa ichi kune zvese zvaungave nazvo.
Pfungwa iri pachirongwa ichi ndeyekupa nzira yekuzadzisa nayo kuyera misiyano yemafungiro emunhu mumwe nemumwe. Chimwe chezvinhu zvakasarudzika zvemanyepo ekuona uye pavakange vakavakirwa pakutanga ndizvozvo ganda rinoshandura mafambiro zvichienderana nezvakawanda nyika zvingave sei mafungiro atinawo pane imwe nguva.
Uyu mutsauko mukuitisa kweganda redu unonzi Electrodermal chiitiko. (Kune ruzivo rwakawanda nezvazvo painternet). Nekuda kweichi chivakwa cheganda isu tichaedza, nerubatsiro rweArduino uye chaiyo software, kuti tione idzi dzese shanduko dzinoitika mukuitisa kweganda zvichienderana nemanzwiro edu kuburikidza nekushandisa kwemifananidzo.
Kutanga kushanda neyedu yakasarudzika nhema detector, sezvatinowanzoona mumiyedzo yakasiyana, tinogona kutanga nekugara chero chidzidzo pamberi pehardware yedu, kubatanidza ma sensors nekupindura mibvunzo iri nyore se 'zvazvinodanwa?kana 'kwaunogara?'. Iyi mibvunzo Ivo vanozoshanda sehwaro hwekutanga kuziva mamiriro epfungwa echinhu chatinoda kubvunza. Gare gare tinokwanisa kubvunza mibvunzo yakasiyana kuti tione kana vari kunyepa kana kuti kwete nekuti vanogona kuvhunduka, izvo zvinozounza shanduko yekutanga.
Rondedzero yezvikamu zvatichazoda kuvaka yedu nhema detector
Kuti tiite chirongwa ichi tichafanira kushandisa microcontroller kuti tione mutsauko uye titumire data kukombuta. Nekudaro, kuti komputa yedu igamuchire iyo data kubva kune ino microcontroller, iyo inofanirwa kuve yakagadzirirwa neiyo yekutaurirana chip izvo zvinotitungamira kumhedziso yekuti, semuenzaniso, iyo Arduino Mini kana iyo Adafruit mune avo anodhura shanduro haishande kwatiri. Iyi poindi yakakosha kugona kuita chirongwa ichi saka, kana pachinzvimbo cheArduino Nano sezvatichazoshandisa isu tine imwe mhando ye microcontroller kumba, tinogona kuishandisa chero bedzi iine yakasangana serial yekutaurirana chip.
Zvakakodzera zvemagetsi zvinoriumba
10 kOhm kuramba
Takatanga kuumba nhema detector yedu nekubatanidza chirongwa chese
Sezvauri kuona mumufananidzo uri pamusoro pemitsara iyi, wiring iyo purojekiti yose iri nyore kwazvo kupfuura zvaungafungidzira nekuti zvakanyanya iwe unofanirwa chete kuita matanhatu matanho akareruka:
Unganidza tambo, uve nerupo nehurefu hwayo, kune iyo Arduino's analog pini
Unganidza resistor kuGound uye kune iyo waya iyo isu yataimbobatana neArduino's analog pini
Unganidza tambo yakati rebei kune iyo Arduino's 5 volt pini
Unganidza iyo anode (gumbo refu reakatungamira) yegirini yakatungamirwa kupini 2 uye cathode (gumbo pfupi) pasi
Unganidza iyo anode yeorenji inotungamirwa kupini 3 uye iyo cathode pasi
Unganidza anode yeiyo tsvuku yakatungamirwa kupini 4 uye iyo cathode pasi.
Iyi ndiyo wiring yese yauchazoda kuti ubatanidzwe. Pamwechete, zvakakwana kuti ive seizvi uye iri pane imwe nzvimbo kuti pasava nechinofamba. Tinogona kuvhara zvese izvi gare gare uye nekuzvipa iyo inotaridzika kuona.
Ino ndiyo nguva yekuvandudza nekuisa ese software kune yedu nhema detector
Usati watombotanga kugadzira chero chinhu, isu tinofanirwa kujekesa kuti, zvese kuronga uye kuumbiridza chirongwa chese isu tinoshandisa yazvino vhezheni yeArduino IDE. Tichashandisa iyi vhezheni sezvo, munezvazvino kuburitswa, mutariri akaverengerwa anotibvumidza kuona iyo data inogamuchirwa nenzira yekuona kwazvo nekuda kwegirafu munguva chaiyo pachinzvimbo chekushandisa iyo serial yekutarisa, uko ruzivo urwu rwakaonekwa mune fomati. chinyorwa.
Kuti timhanye ino tarisa isu tinongofanirwa kuvhura iyo Arduino IDE, enda kumaturu emenyu uye inofanirwa kuve iri pazasi peiyo serial monitor.. Kana tangova nezvose izvi zvakagadziriswa, iwe unongofanirwa kurodha pasi iyo faira iyo yandinokusiira iwe pazasi pemitsara iyi, vhura iyo uye uiise iyo yakanyorwa kubhodhi rako.
Isu tinoita clip dzichaenda paminwe yechinhu kuti chiongororwe
Kana tangova neprojekiti zvanyatso zadziswa, inguva yekutora imwe nhanho uye gadzira iwo clip anozove nebasa rekuona kuitisa kunoitwa neganda redu pane imwe nguva.
Sezvauri kuona mumifananidzo iyo yakapararira mukati meichi posvo, zano rinopfuura namatira tambo yealuminium pepa kusvika pasi peiyo velcro strip. Izvi zvinofanirwa kuitwa muzvidimbu zviviri zvevelcro yatinozoshandisa.
Kana tangova nematanda akagadzirira, uye sezvaungaona mumufananidzo uri pamusoro pemitsara iyi, inguva yeku batanidza nealuminium pepi tambo iyo isu takabatanidza kune analogini pini yeArduino. Tinofanira kuita nhanho iyi, chaizvo nenzira imwecheteyo, nechimwe chidimbu chevelcro uye tambo iyo yatakabatana neArduino pini yazvino, kune iyo 5 volt pini. Ita shuwa kuti kubatana kwakasimba uye hakuzodimbure nekungofambisa iyo velcro zvishoma.
Kugadzira bhokisi rekuchengetedza zvese zvedu Hardware
Mune ino kesi isu ticha bheja pa gadzira mhando yebhokisi yekuchengetera zvese zvinhu zvemanyepo edu detector mune yakasarudzika asi nzira inoshanda. Pfungwa ndeyekugadzira kamuri diki uko iwe kwaunogona kuchengeta iyo velcro mhete. Izvi, zvakare, zvinofanirwa kunge zvine maburi matatu madiki kuitira kuti maLED aoneke.
Sezvaungave uchifungidzira, izvo zvinhu zvatiri kuzoshandisa kugadzira rudzi urwu rwebhokisi ndiyo kadhibhodhi inowoneka mune runyorwa rwezvinhu zvinodiwa. Kubva pamakadhibhokisi atinawo, tichacheka maremangara maviri e15 x 3 masendimita, rectangle ye15 x 5 masendimita, matenderedzwa matatu e4 x 3 masendimita, rectangle ye 9 x 5 masendimita uye rectangle ye 6 x 5 masentimita.
Kana ese marange akavezwa, isu tinotora iyo 15 x 5 cm imwe ichashanda sehwaro. Iwo maviri e15 x 3 uye maviri 5 x 3 marange anonamirwa kumativi echigadziko. Ino yave nguva yekunamira yechitatu 5 x 3 rectangle kune iyo base pa6 masentimita kubva kudivi.
Panguva ino unofanirwa kunge uine rectangle yakakamurwa kuita mativi maviri, imwe iine kureba kwemasendimita matanhatu uye imwe iine kureba kwemasendimita mapfumbamwe.. Rutivi rune kureba kwemasendimita matanhatu ndiko kwatichaisa zvigadzirwa zvemagetsi apo, kune rimwe divi, ndipo pachaiswa zvigaro zvemunwe.
Panguva ino isu tinofanirwa chete kucheka maburi matatu, saizi yeiyo LEDs, mune 3 x 6 cm rectangle, tichianamatira padyo ne5 cm. Inongosiyiwa yakanamatira, ine tepi yekunamatira, ipfupi divi re 6 x 9 cm rectangle parutivi kure kure ne 5 cm divi. Iyi yekupedzisira nhanho ichashanda senge rudzi rwechivharo icho chinofamba chokwira nekudzika kuchengeta nekuzarura zvigunwe zvemunwe..
Kana tangoisa zvese zvinongedzo mukati mebhokisi, kana zvese zvikafamba mushe, tinofanirwa kuve nediki nhema detector pamberi pedu. Sezvo iwe uri pamwe uchifunga, kunyangwe mashandiro ayo ari nyore kwazvo, chokwadi ndechekuti haina kunyatsojeka kubvira mazhinji nyanzvi dzekunyepa nhema dzine huwandu hwakawanda hwema sensors, senge yemoyo wekutarisa, kuona neakawanda chokwadi kana chidzidzo chiri kunyepa kana kwete.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Arduino » Maitiro ekuita nhema detector neArduino